Gudoonka Baarlamaanka Hirshabeelle oo shil diyaaradeed ka badbaaday | KEYDMEDIA ONLINE
Diyaarada oo ku socota joog sare hawada gobolka Hiiraan ayuu demay mid kamid ah matooradda ay ku duulaysay, waxaana duuliyaha uu qaatay go'aan ah inuu ku dejiyo Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle C/xakiin Luqmaan, ku xigeenkiisa iyo Xildhibaanno badan ayaa maanta ka badbaadey shil diyaaradeed xili ay kusoo jeedeen magaaladda Beledweyne.
Diyaaradda oo ka duushay Jowhar kuna sii jeeday xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo wajahday ciladda kadib markuu uu demay mid kamid ah matooradda ay ku duusho, iyadoo arintaas ku qasabtay duuliyaha inuu ku dejiyo Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Cabsi ayaa soo wajahday rakaabkii la socday diyaaradda markii lagu wargeliyay inay jirto cilad, islamarkaana ay u dhaxeeyaan nolol iyo geeri, sidaas darteed loo baahan yahay inay ku degtaan Garoonka Muqdisho, oo laga helayo dab-demis hadii ay dhacdo.
Lama sheegin shirkadda leh diyaaraddan, laakiin waxay kamid noqonaysaa dhacdadan shilal kusoo badanaya hawada Soomaaliya oo dhinaca duulimaadka, waxaana lagu eedeeyay dowladda Soomaaliya inay ku fashilantay ilaalinta badqabka iyo tayada diyaaradaha wadanka ka shaqeeya.
Saddex diyaarad ayaa sanadkan ku dhacay Beledweyne, Berdaale iyo Buurdhuubo, oo ka kala tirsan Hiiraan, Baay iyo Gedo, waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isagu jira.
0 Comments Topics: diyaarad soo dhacday soomaaliya